Beehind inokutendera kuti utore iyo iPhone 4S / iPad 2 kune iOS 6.1.3 | IPhone nhau
Beehind: chishandiso chitsva chekudzikisira kune iOS 6.1.3 yemidziyo 32-bit
Pablo Aparicio | | iPhone 4S, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Vazhinji vashandisi, kunyanya varidzi vePad 2 kana iPhone 4, vachishuvira kuyeuka nguva idzo mudziyo wavo waakashanda nehunyanzvi. Iko kugona kwakanyangarika kwavari nekusvika kweIOS 7 uye mashandiro akadonha zvakanyanya nekuuya kweIOS 8. Vazhinji varidzi veiyo iPhone 4S vangangoda kukwanisa kudzokera kuIOS 6.1.x uye, kutaura zvazviri, zvaive zvatokwanisika nechombo odysseusOTA, asi chishandiso icho chaingowanikwa kuMac.Zvino, nekuda kwemushandisi hudiny, uyo akataura pamusoro penyaya nezve odysseusOTA, taona kuti iripo Kumberi, chishandiso chekudzikisira pasi kune iOS 6.1.3 yezvigadzirwa zvine 32-bit processor inoshandisa winocm kloader uye inoshanda paWindows makomputa..
Chekutanga pane zvese, taura kuti hatina kuzviedza isu pachedu, asi hudiny anovimbisa kuti yakabudirira uye pa twitter pane vanhu vazhinji vanovimbisa kuti ivo zvakare vakakwanisa kudzikisira zvishandiso zvavo. Zvine musoro, Actualidad iPhone haina mhosva kumatambudziko aungasangana nawo panguva yekuita.
Iyo yekuvandudza inodaro Beehind chishandiso cheWindows Vista kana chepamusoro icho chinokutendera iwe kudzikisira kumadhigiramu makumi matatu nematatu. Hechino vhidhiyo yake yekuratidzira.
ONA [8/8/2015]: Kunyangwe musimudziri achivimbisa kuti inoenderana neese 32-bit zvishandiso, akasimbisa pane twitter ku @pabmore (Kutenda yambiro) iyo, parizvino, inoshanda chete neiyo iPhone 4S uye iyo iPad 2. Varidzi vezvimwe zvishandiso, uchafanirwa kuve nemoyo murefu.
@pabmore zvinozoita 🙂 ingoita moyo murefu
- Beehind (@beehindowngrade) August 8, 2015
1 Beehind Inoenderana Midziyo
2 Maitiro ekudzikisira kuenda kuIOS 6.1.3 neBehind
Beehind Inoenderana Midziyo
Maitiro ekudzikisira kuenda kuIOS 6.1.3 neBehind
Kushandisa Beehind Iwe unofanirwa kuve neiyo iPhone / iPad ine jailbreak, saka danho rekutanga raizove rekuparara kwejeri (kana usati watove).
Isu tinotora IPSW yeIOS 6.1.3 inoenderana neyako iPhone / iPad modhi ye www.vachelism.com somuenzaniso.
Isu tinoisa OpenSSH naCydia.
Tinodzvanya pabhatani "Sarudza".
Takasarudza ipsw yatakatora pasi padanho rechipiri.
Kana tangozivikanwa, tinoita tinya pa "Hongu".
Isu tinonyora iyo ECID yechigadzirwa. Kana isu tisingazvizive, tinobatanidza iyo iPhone / iPad kune komputa uye tinya pamutsetse webhuruu pazasi pebhokisi rebhokisi kuti uzviwane wega.
Tinoita tora pa "Vaka IPSW!".
Mamwe mameseji achaonekwa uye mune ese acho tinodzvanya pa "ok".
Isu tinova nechokwadi chekuti chishandiso chakabatana uye tinodzvanya pane "Pinda Yakavharirwa DFU Mode" chenjera kuzviita kamwe chete.
Tinomirira 30-40 masekonzi. Kana ikasashanda, isu tinopfiga Beehind uye kuivhura zvakare, enda kune "sarudza modhi" menyu uye sarudza "kloader mode".
Tinoita tinya pamatombo matatu (…) uye sarudza iyo iBSS.img3 faira iyo yatichawana mune iyo faira iyo Beehind yakanga yagadzira pane desktop.
Isu tinotora kadhi yeIIPI yedhijitari (nekuenda kuZvirongwa / WiFi / (i) yenetiweki / IP Kero) uye isu tinonyora mubhokisi chena rebhokisi ratinoona paBehind.
Tinoita zvakare tora pa "Pinda Yakavharirwa DFU Mode".
Kana isu tichiona iyo meseji "Mushure megumi masekondi. hapana zvishandiso zveDFU […] ”, tinodambura chishandiso uye tochidzorera zvakare. Ipapo tinobaya pana "OK". Mune inotevera meseji, zvakare "OK".
Muhwindo rinotevera, tinobaya pamapoinzi matatu (…) uye isu takasarudza IPSW iyo Beehind yakanga yagadzira pamberi.
Tinoita tinya pa "Dzosera!" uye isu tinomirira.
Ndinovimba kuti, kana iwe wafunga kuyedza Beehind, yakushandira iwe uye uchafadzwa nechishandiso chako mukubwinya kwese.
Dhawunirodha Beehind (tinya paDownload).
Imwe nzira Beehind Download.
Beehind Twitter yekutsigirwa uye kugadzirisa.
Kana iwe uri kusangana nekutadza, unogona kuyedza kurodha rinotevera chishandiso:
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 4S » Beehind: chishandiso chitsva chekudzikisira kune iOS 6.1.3 yemidziyo 32-bit
Gonzalo parisi akadaro
Kune iyo 4 kwete? : '(
Pindura Gonzalo Parisi
Mhoro Gonzalo. Zvinoenderana nefaira rinouya nechirongwa, rinoenderana. Ini ndakawedzera iyo nyowani ruzivo.
Tsanangura kuti wakazviita sei CARLOS J?
Mubvunzo, izvi zvakare hazvina kukodzera iPad mini 1?
Mhoroi, Sda2012. Nhau dzakanaka. Mune iyo faira inoona kuti inoenderana ne32-bit zvishandiso uye inosanganisira iyo mini mini 1. Ini ndinowedzera ruzivo kuchinyorwa.
Kutenda kwakakwana, ini ndichaedza.
Ivan Galan Guimera akadaro
Ini ndinofungidzira kuti kune ipod inobata 5g zvakanaka?
Pindura kuna Ivan Galan Guimera
Karlos phary akadaro
ZVAKANAKA ZVANDINGATAURA IZVI KUTI odysseusOTA YAKANYANYA KUNOBATSIRA APA Bvunzo .. zvakanyanya, izvi neshanduro ye facebook 5.5 uye zvinondishandira 100%: 3
Pindura kuna Karlos Phary
Zvingaitwe muna 4?
Kwete, 4s chete
Menuel Skywalkerr akadaro
Hei shamwari, ndinodzima iCloud account ???, kubva pandakatenga yangu yechipiri-ruoko uye ivo vakandinyengera
Pindura Menyuel Skywalkerr
Ini handizive ..., handina kumbobvira ndave neacloud account.
Ta Juan-ta akadaro
FaceTime inoshanda kwauri here?
Pindura Ta Juan-ta
Oscar Ml akadaro
Zvakanaka ndatsvaga iyo firmware uye zvinoita sekunge vanyangarika kubva paInternet, hahahaha, zvese zvinongedzo zvandinoona zvinopa kukanganisa kumwe chete: (((((((
Pindura kuna Oscar Ml
unogona kudzokera kuIOS 7.1.1 / iOS 7.1.2 kana chete kuIOS 6.1.3?
Alejandro Parra akadaro
usatarisezve mberi getios.com
Pindura kuna alejandro parra
Flavio yohonson akadaro
Zvinoita here kudzikisira iyo 4Gb iPhone 8s? Sezvo zvakauya ios 7 kubva kufekitori
Pindura kuna Flavio Yohonson
muma4s haudi shsh kuyedza iwe usarasikirwe nechinhu, tevera vhidhiyo nhanho nhanho uye zvichakunakira iwe.
Hongu zvinogoneka, zvinoshanda zvakakwana pane yangu 4gb iphone 8s, uye zvakandisiira ini nezve 2gb yakawanda nzvimbo ... Tremendous mutsauko 🙂
Lane mcbean akadaro
Yangu 4S ine 7.1.2 inoenda yakasarudzika
Pindura kuna Lane McBean
Hipolito Alberto akadaro
Perooo iCloud chii?
Pindura kuna Hipolito Alberto
Pasina SHSH hazvishande pane chero emamwe madhijitari, chete pa iPhone 4S uye iPad 2 ...
Pasina kuisa yakavhurika ssh, haugone kudzikisira?
Mhoro. Ini zvakare ndine mubvunzo nezve iCloud. Ini ndinofunga ndinonzwisisa kuti kuve JAILBREAK yagadzira mudziyo? Saka kana iwe uine 32-bit chishandiso chakakanganwa iCloud, unogona kudzokera kuIOS 6.xx neJAILBREAK…? Uye kana chishandiso chisina kuvhurwa, chingodzoserwa, chingadzoserwa kuIOS 6.xx?
Kana mumwe munhu aine imwe yeiyi mhinduro dzakaratidzwa, iwe unogona here kutaura nezvazvo?
Carlos J akadaro
JAILBREAK FUNCTIONAL mudziyo unodikanwa kuti uite kudzikisira maitiro. Kana usingakwanise kupinda nekuti nharembozha yako yakavharwa neICloud, ndinofungidzira kuti unogona kuita izvi .. .. uye kana uchikwanisa, uchitanga iOS6 yaizokumbirawo password yeiyo iCloud account. Iwe haugone kutsausa chengetedzo sisitimu, kana iwoyo uri mubvunzo wako, ucharamba uchibuda.
Pindura kuna Carlos J
Haha .. !! Ndatenda nemhinduro yako.Carlos J. Ini ndaifunga kuti kana imwe yenzira mbiri iyi haigoneke. Ndatonzwa kuti chishandiso chine iCloud chichagara chichiudza Apple kuti chakagadzirwa, uye chinogara chiri mukudzoreredza kana kugadzirisazve chishandiso kuti iCloud meseji igare ichisvetuka isingakwanise kumisikidza kunze kwekunge waisa ID yako.
Zvakataurwa. Ndatenda Carlos J. Ndichaudza shamwari ine dambudziko iri kuti haizombokwanisa kuigadzirisa.
Kukwazisa zvine hushamwari shamwari. Zviya. Yakanaka kwazvo posvo. Ndinokutendai Actualidadiphone.
Jose bolado akadaro
Pablo Aparicio ..
Kana ndikadzikisira kubva paIOS 8 kuenda kuIOS 6. Ipapo mashandisiro aisazowirirana kana vaizopa zvikanganiso? Kana pane imwe tweek yekunyengedza iyo system mukutenda kuti isu tine yazvino vhezheni vhezheni yakaiswa ..
Pindura José bolado
Zvinoenderana nekuti iyo app inoshandisa maraibhurari ezvinyorwa zvitsva zveIOS kushanda, kana ivo vanongokumbira vhezheni nyowani nekuti ivo vanonzwa senge. Iko kuenda kunoyedza imwe neimwe kuti uone kana vachishanda. Asi kana iwe uchida mafaera kubva kuvatsva vhezheni dzeIOS, hapana nzira yekunyengedza iyo system kuti ishande.
Paunenge uchiisa iOS kubva ku dfu, iwe waizoidzorera zvachose uye yaizo fomatiwa. Iwe unenge uine fekitori ipad. Waizofanira kudhawunirodha maapplication zvekare. Ive nekuchenjerera, kune zvimwe zvinoda ios7, asi kune zvimwe zvinokupa iwe sarudzo yekurodha yapfuura vhezheni ye ios5 / 6.
Hapana chekunyepedzera .. .. udza iyo kune yangu yekare iPhone 5, ini ndichangobva kuikanda kubva iOS8 kuenda kuIOS6 uye inoshanda zvakakwana.
Ngatione kana tichidzidza zvimwe tisati tasununguka vana.
Wakatoyedza pane iphone 5, handiti? Mubvunzo wangu, bhatiri racho rinogara kwenguva refu, handiti? nekuti kana zvisiri ini ndinorangarira zvakashata neiyo ios 6 yakagara zuva rimwe chete nyore ... Kwaziso!
Pindura kune pantin097
Ndakamudzikisira nekuyedza nzira, asi ini handisi kushandisa nhare sezvo ndine 6+. Kana bhatiri rako rakagara kwenguva yakareba neIOS6, rinofanira kugara kwenguva refu kana iwe uchideredza.
Ehezve, ini ndinofunga nzira iyi yakanyanya kune iyo 4S, iyo iPad 2 kana iyo Mini 1, kune avo vakarasikirwa nekuita nekufamba kwenguva pazviteshi zvavo uye vanofarira kumhanya kune maapplication, nekuti ramba uchifunga kuti kana iwe ukadzikisira pasi, mazhinji maapps nhasi bvunza iOS7.
Tsanangura kuti wakaita sei maitiro eiyo iPhone 5. Ndokumbirawo.
Zvakafanana naSaddan, tsanangura kuti wakazviita sei ndapota, nekuti nechishandiso ichi (Beehind v0.2) hazvindibvumidze kuisa IPSW ye iPhone 5. 4S chete nePadad 2. Kukwazisa
Fernando Fuentes akadaro
Iwe wakakwanisa Kudonhedza kune iyo iPhone 5,
Wakazviita sei kana chaive mudziyo upi chaizvo?
Wakafanirwa here kushandisa iyo SHSH kubva kuIOS 6 (iyo yakachengetedzwa kumashure muna 2013)
Kana iwe wakazviita pasina iyo SHSH, uchishandisa chete Beehind?
mudziyo wako muenzaniso A1428 kana zvakasiyana?
kusvika pandakaona zvinogona chete kuitwa mushure mekuchengetedza iyo SHSH.
Pindura Fernando Fuentes
Juan Manuel akadaro
inogona chete kune ios 6.1.3? Ndakabva pa6.1 kusvika pa7
Pindura Juan Manuel
haishande pane ipad mini 🙁
Pindura kuna Jose miguel
Jesu C. akadaro
Ini ndangoedza kuzviita pa iPhone5 asi inongopfuurira kuenda uko firmware inosarudzwa! : S
Pindura kuna Jesu C.
Jesu Guzman akadaro
Iphone 5 GLOBAL haishande pakusarudza firmware pane chikwangwani chinoti BETA LIMITED.
Pindura kuna Jesu Guzman
Kwete, iwe unoisa ios 6.1.3 kubva pakutanga. Ndokureva kuti iwe uri pasi peshanduro dzeapps uye maapplication angave aine ios 6.1.3. Uye chenjera, semuenzaniso kushora, ivo vakamira kutsigira ios6.
Joeri b akadaro
Nhema, Spotify kana ichishanda neIOS6, ndinayo yakaiswa pane yangu 4G iPod
Pindura Joel B
Marcelo Carrera chinobata mufananidzo akadaro
Ini ndaida chimwe chinhu kuti chibude kuzodonhedza, asi yangu 4s yakasarudzika neIOS 8.4 uye kuputsika kwejeri ... Iyo yakanyanyisa kugadzikana kupfuura yapfuura shanduro dzeIOS 8. ini handioni kukosha kwekudzikisira.
Pindura Marcelo Carrera
Mumwe munhu akakwanisa kushandisa FaceTime paPadad neIOS 6.1.3
Chinhu chakashata ndechekuti isu hatigone kuita Face time mafoni, pane mumwe munhu akazviwana neimwe nzira? Zvinonyadzisa nekuti iyo iPad inoyevedza neiyi iOS
Ini ndakangozviita nema4s, ndiko kuedza nemamwe mamodheru asi zvinoshanda zvakakwana
Ini handikwanise kuisa peji rekurodha Beehind 🙁
Ndiri kuenda nekukurumidza uye nekukurumidza kuti ndiise pawebhusaiti yekurodha!
Pablo, ko mubvunzo, ini ndine pc yangu ine 7-bit windows 32 uye pandinoisa iyo beehind install, iyo icon yese inoonekwa, asi pandinoda kuivhura kuti itange maitiro ini ndinowana kukanganisa, ndiko kuti, ini haikwanise kuvhura chirongwa. Iwe unofunga kuti iwo udzame hwakakonzerwa nei? Ini ndakamirira mhinduro yako, ndatenda zvikuru.
Pindura kuna Walther
Mhoroi, Walther. Ini handikwanise kukupa mhinduro yechokwadi nekuti ini handina kukwanisa kuyiyedza uye ini handishandise Windows futi. Wakamboimhanyisa here semutungamiri? Iyo yekuvandudza yakasimbisa kuti parizvino inongowirirana neiyo 2 iPad uye iPhone 4S. Iri kushanda kuti ienderane nemamwe ese 32-bit zvishandiso kubva ku iPhone 4 kusvika 5c, kubva kuPad ​​2 kusvika ku4 uye iPad mini. Zvakare ramba uchifunga kuti iri mubeta.
Ini ndinowedzera kuti zvinokurudzirwa kuti ushandise izvi: https://drive.google.com/file/d/0B3OvePI0m-B5UlF1VVhZaTNpVVE/view?usp=sharing
Montiel Chàvez Bernard akadaro
Hapana kudzikisira kunobvisa icloud, kune mapenzi chete anoda zvinhu zvevamwe uye vasina kusimba vanotenga zvakabiwa, zvirinani kuchengetedza mari iyoyo kuti vadye mamwe mazuva maviri, uye sezvo vaenda kuchitoro chemaapuro, HANDINA KUMBIRA KUTI PANO VANOTENGESA ZVINODZIDZISWA NEICLOUD, mumwe munhu achanditumira iyi link kuti nditsigire izere beehind, ndine beta, 5213 3184 10231 whatsapp
Pindura Montiel Chàvez Bernard
zve ipod 4g ?????
Ini ndaive neyechipiri yeruzhinji beta yeIOS 2 yakaiswa uye ini ndanga ndatoguta nekunonoka kwechigadzirwa changu.
Ndiine yangu 2 iPad 16 WIFI 8.4Gb, ini ndakadzikisira pasi kuenda ku2.410, kozoti Jailbreak neTaig XNUMX uye pakupedzisira ndakatevera nhanho dzeiri rinoshamisa peji.
Inonzwa kushamisika kutarisa iyo yekare iOS, asi inoshanda zvakanyanya nekukurumidza. Ndatenda chaizvo.
Pindura kuna Oscar
Ini ndinogona kukwidziridzira kune iOS 8 mushure mekudzikisira?
Pindura kuna Arturo
Iyo iPhone 4 inogona kudzikiswa here? Uye mumwe munhu akazviita here? Ndatenda
Xavi botero akadaro
Ini ndiri 1 gen ipad mini mushandisi, panenge paine nzira yekudzikisira kune ios 7? kana kubva kuiyos 6 ndichakwanisa kuisa kune ios 7?
Pindura kuna Xavi botero
mumwe munhu akatoyedza kana zvichigona kuitwa pane iphone 5c
Mhoro Mario. Haugamuchire chikwangwani kwachinoti mu iPhone 4 kana ichishanda? Kana iwe uine imwe chinyorwa kana Apple chishandiso, edza kuona .. A 4s semuenzaniso ... 🙂
Kungotamba. Ndinovimba handivhiringidze chero munhu. Zvinotoshamisira .. Dzimwe nguva zvinoitika kuti zvakaremberera uye ini handichengete imwe kana yatotaura kare uye ndinoisazve komendi makumi maviri ndisina kuziva imwe .. Zvakaitika kwandiri imwe nguva 🙂
Mhoro, Marcelo. Ndiri kufarira kwazvo Saver kana yako iPhone 4s ichishanda sezvaunotaura, zvirinani pane kwete ios 8? Iwe une Jailbreak yaitwa, mangani ma tweak iwe unayo uye ndeapi iwo? Ndine imwe paIOS 8 .2.1 uye ini handivimbe chero chinhu nezve kuiisa kuIOS 8.4 nekuda kwezvakataurwa kurudyi kuti inodya bhatiri ..
Ndokumbirawo, kana mukandipindura uye nekutsanangura kusahadzika kwangu, ini ndingafarire kwazvo. Muchokwadi, ini handina kana chishandiso chine iOS 8.4 nekuda kweiyo vateria.
Ndingafarire kutaura kwako pane chiitiko cheiyo iOS 8.4 pane iPhone 5s, iPhone 5, iPad 2 3G + wifi uye 4s. Ndakamutsvoda, Saver yakatorwa kubvira ios 8.4.1 ichaburitswa uye JAILBREAK yatove zero! Mhinduro ndapota !!
Mhoro sapic ini ndangoona yako comment, uye zvakanaka ini ndichakuudza kuti zvakafamba sei, sezvo ini ndichigadzirisa kune iOS 8 ... kubva panguva iyoyo zvese zvakatanga zvisirizvo, uye kunyangwe zvakadaro ndakaramba ndichigadzirisa iyo iPhone nguva dzese dzavanoburitsa vhezheni nyowani , kusvika pandakazosvika pa8.3 ipapo ndakafunga kuti muchokwadi hazvizove zvakafanana! ... asi iOS 8.4 yakabuda uye zvese zvakagadziridzwa, ikozvino nenyaya yebhatiri, ndiyo nyaya yakagara iripo, pandinoishandisa ine 3G data, inogara kwemaawa mana, asi kwete, asi sekutaura kwangu , rakagara riri dambudziko nebhatiri, handizvidembi kuva naro ne4, ndaive nemusoro wakawandisa neshanduro dzakapfuura zvekuti yazvino yakagadzirisa ... uye nekuremekedza JB kune mashoma ma tweaks ayo Ini ndinoshandisa: activator, cylinder, dockshift, speed intensifier, winterboard uye zeppelin ... ndisati ndashandisa kuora kwezuva ... asi ikozvino zvabhadharwa. Ndinovimba ndichakubatsira nezvakanyorwa ... kwaziso
Patricio Eduardo Reyes Bermudez akadaro
ye kerian kudzikisira kune iphone 4 https://www.youtube.com/watch?v=UpmYC-dUwVk , Ini ndakangozviedza uye ini ndine iphone 4 muna 5.1.1, nei 5,1,1? tsime ndiri kuyedza kuti muverengi wemakadhi kadhi ashande asi ini ndakangoedza uye hapana, kune rimwe divi iyo ipad 2 ine beehind downgrade ini handikwanise kuzviita jb ne powsixwn iyo purogiramu inopunzika, zvakare kana uine mibvunzo kana rubatsiro padambudziko rangu unogamuchirwa
Pindura kuna Patricio Eduardo Reyes Bermudez
Pane chero munhu akaiwana pane Yekutanga Gen iPad Mini? Ini ndinowana yambiro inoti "BETA LIMITED", unoziva here kuti ndingagadzirisa sei izvi?
zveichi chiitiko iwe unofanirwa kuve nacho itunes, uye kana chingave chakakosha vhezheni?
Handirangariri achitaura chero vhezheni yeTunes. Tichitarisa pamazuva acho, vhezheni yazvino yeTunes inobva munaChikunguru 12 uye chinyorwa ichi chinobva pana 31. Kana chiri chinetso neTunes, inofanira kunge iri bhagi iyo musimudziri anofanira kugadzirisa.
pane chero chinhu chinozivikanwa nezve iko kudzikisira kwepad 3?
uye kana zvichigona kuitwa pasina shsh?
Mhoroi, Julio. Ivo havana kutaura nezve iyo iPad 3 kubvira. Yaifanirwa kushanda, asi yakanga isiri muna Nyamavhuvhu uye havasati vaigadzirisa.
Yakagadzirira, hapana kunetseka pane iyo iPhone 4S
kana uchiderera pamwe nekuputsika kwejeri ... inorasika here mushure mekuzviita ???
Yakagadzirwa ne iphone 4s. Ini ndave kurodha pasi kubva kuIos 8.1.3 kuenda kuIos 6.1.3 zvakakwana pasina dambudziko !! ZVINOSHANDA 100% NDATENDA !!
Mhoroi masikati akanaka ndanga ndichida kuziva kana iwe uchikwanisa psr x kunditumira iyo yekudhanilodha chinongedzo cheBehind, sezvo hapana kana imwe yacho iripo, ndinokutendai zvikuru pamberi
Zvakanaka, ini ndine iyo iPhone 4 GSM uye yaenda yakakwana mune iyo thered mode asi pandinopedza inondisiira iyo iPhone isina chinhu chekubatanidza nayo kuTunes neiyo 0.4 vhezheni, imwe kuzviisa pasi kana imwe yakazviita neiyo iPhone 4?
yakanaka ipad 3 (ipad nyowani) munguva yayo handifarire iphone 4s uye ipad 2 ndeyeumbozha ... xq n zvinoita here? Ini ndaigona kuisa ipad 2 mune ipad 3? Ndatenda!!!
Pindura kune fran
Manotsi app pane ios 6 yamira kuwiriranisa neICloud manotsi. Chero ani anoziva chero mhinduro?
Pindura kuna fas1989x
zvinoita here kuti jb ive mune vhezheni 6.1.3? p0sixpwn chishandiso hachishande 🙁
Ini ndakadzikisira pasi iPhone 4s kuIOS 6.1.3 uye chokwadi ndechekuti kana ichidzorera mashandiro ane hutsinye, maererano nemaitiro echako maitiro (kamera, mameseji, masetingi, mapikicha, nezvimwewo).
Nezve rutsigiro rwechitatu-bato kunyorera (facebook, twitter, instagram, dropbox, flipboard, youtube, nezvimwewo) "zvakanaka" uye saka mumakotesheni, nekuti pakutanga zvese zvinofamba mushe, asi zvino zvimwe zvikumbiro zvinonamira kana kuvhara. , Kunge facebook kana iyo safari pachayo painorodha mapeji, ayo akazara kushambadzira kana mifananidzo.
Rutsigiro rwekushandisa rwakaganhurirwa, spotify haishande zvachose, mamwe anogona kutorwa pasi asi vhezheni yechinyakare ine izvo zvakawanda zvitsva zvinhu zvisiri, zvimwe zvinonakidza zvinoshandiswa zvinongobva chete ios 7 kumusoro.
Bhatiri ipfungwa iyo zvakare mune makotesheni anotaridzika chaizvo, inogara chimwe chinhu kwezuva rese nekushandisa kwepakati zvakanyanya,
Saka mune ruzivo rwangu mumazuva gumi nemapfumbamwe ekushandisa seyenhare mbozha, ndinogona kutaura kuti kune hwaro hwoumbozha, hapana chinhu chekugodora iyo iPhone nyowani, asi kana iwe uchida kukanda zvakawanda kugadzirwa, iwo maficha anosiya chimwe chinhu chinodiwa .
Ndichaedza kudzokera kuios 8 kana zvichikwanisika, uye ndinovimba kuva nazvo pandinokwidziridza kuva ios 9, ndinovimba mumwe munhu achawana pfungwa iyi ichibatsira.
Pindura kuna Louis
Vanhu ini ndine mubvunzo, mumatanho ayo anoti kutanga iwe unofanirwa kuenda kuJailbreak. asi zvadaro inoti kuisa openSSH kubva kuCydia. Zvino dhawunorodha vhezheni 0.5 yeBehehnd uye pandinoivhura padivi, Jailbreak, Gadza Openshsh uye Isa Cydia sarudzo dzinoonekwa. Idzi sarudzo dzinondishandira? kuita iwo matanho apfuura ... nekuti ini handina kumbobvira ndapunzika, kana chero chinhu. Ndine yepakutanga ihpone 4 kubva kufekitori uye mahara. Ndatenda
zvimwe zvakafa zvisungo kupfuura sor juana
Pindura kuna dan
Juan Luis G. akadaro
Ndakaedza kudzikisira kune iyo iPhone 4s ine 9.3.5 kune vhezheni 6.3.1 ine beehind asi hapana nzira, pandinoivhura ndinowana kukanganisa kubva ku .net fomati yekubatanidza kutadza (404) uye imwe yakafanana asi na (: rakarambidzwa) .Ndakaiyedza pa windows 10 pro zvese 32bits uye 64bits uye hapana chekutaura kuti jeri ndiro foniix.
chero mhinduro kune .net kukanganisa?
Pindura Juan Luis G.
Cyte, iyo nyowani nyowani iyo inonatsa iyo Cydia tsananguro
Iwo maficha achauya kune yeYouTube app yeIOS